Kugara neInvestment yeGreek neGolden Visa
Isu tinopa Ehupfumi Kuenda Kunoshanda Sevhisi kuGreece ye:
● Kugara nekudyara kuGreece
● Ugari nekudyara kubva kuGreece
● Visa yegoridhe kuGreece
● Pasipoti yechipiri kubva kuGreece
● Kugara nekudyara kuGreek nekudyara muzvivakwa
Best MaAgents ekugara zvakare neInvestment kuGreek uye Magweta e Kugara patsva neInvestment kuGreek uye ma broker e real estate Residency zvirongwa zvinoshanda zvakabatana kuchengetedza kwevatengi.
Kugara nenzvimbo dzekudyara kuGreek kunopa mabasa ekugara nekudyara kuGirisi, Kugara nehurongwa hwekudyara kuGreece, Kugara nehurongwa hwekudyara kuGreece, Residency yechipiri nekudyara kuGreece, Residency mbiri nekudyara kuGreece, ugari hwehugari nekugara nekudyara kuGirisi. , Kugara zvechigarire nekudyara muGrisi, Kugara kwenguva pfupi nekudyara kuGreece, Kugara nehurongwa hwekudyara kuGreece, Kugara nehurongwa hwekudyara kuGreece, Citizenship nekudyara kuGreece, Citizenship nemapurogiramu ekudyara kuGreece, Citizenship nehurongwa hwekudyara kuGreek, wechipiri Ugari nekudyara muGrisi, hunyanzvi hwevagari nekudyara kuGreece, kugara nekugara nekugara nekudyara kuGirisi, kugara nekugara nekugari nekudyara kuGreece, zvirongwa zvehupfumi zveGreek, Citizenship nehurongwa hwekudyara kuGreece, Citizenship nehurongwa hwekudyara kuGreek, chechipiri pasipoti kuGreece, mapurogiramu epasipoti eGreek , chirongwa chechipiri chepasipoti kuGreece, pasipoti yepiri yechipiri kuGreece, pekugara uye pasipoti yechipiri kuGreece, repasipoti repasipoti repiri kuGreece, pasipoti yepiri nekudyara kuGreece, pasipoti yechipiri yehugari kuGreece, yechipiri pasipoti chirongwa kuGreece, zvirongwa zvechipiri zvepasipoti kuGreece. , vhiza yegoridhe kuGreek, vhiza dzegoridhe kuGreek, zvirongwa zvendarama vhiza kuGreece, vhiza yegoridhe vhiza kuGreece, yechipiri vhiza vhiza kuGreece, chechipiri vhiza vhiza chirongwa kuGreece, mbiri yegoridhe visa kuGreece, ugari uye vhiza vhiza kuGreek, kugara uye vhiza yegoridhe kuGreece, mugari vhiza mugari kuGreece, dhiza vhiza scheme kuGreek, goridhe vhiza zvirongwa kuGreek.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Residency nekudyara kuGreek nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment kuGreek kweResidency nekudyara: EUR 250,000
Nhanganyaya Greece uye Residency neInvestment
Dzidza zvakawanda nezveGreek
Yakakura, yakasiyana, uye inopenya nekunze, Girisi mubatanidzwa unokwezva wezvitsuwa zvine zuva, inopfuura makomo, humhumha madhorobha, uye tsika dzisingagumi. Yakafukidzwa nekubata kunodziya kweGungwa reAegean, ine simba, inokoka, uye yakatakurwa nekuvhunduka: yaive yekutanga nyika ruzhinji mitemo, ichidzokera kuzana ramakore rechishanu BC
Kunyangwe iwe uri muenzi wechinguvana kana kushuva ex-pat, Greece ine zvese: yakasarudzika gore rese mamiriro ekunze, zvine mwero mukana, chikafu chinoshamisa, vanhu vanogamuchirwa vemo, uye nhoroondo inoshamisa. Chikamu chimwe nechimwe cherudzi urwu chinopfachukira zvine mutsindo uye ruzha rweinofanira-kuona nzvimbo inoenderera nekusingaperi: Atene, Crete, Delphi, Olympia, Santorini, Skiathos, Meteora, Rhode, neCorfu zvinongova chiratidzo chechimwe chinhu chakakura.
Greece yanga iine magineti ezororo, zvisinei, yakakura zvakakwana kuti ugone kuwana chako chakavanzika 'wedenga nzvimbo' kure nemapoka. Chokwadi, kunyangwe muchimiro chezhizha apo zviwi, mhenderekedzo dzegungwa, uye zvisaririra zvekare zviri kufashukira nevashanyi, iwe parizvino unogona kuwana zvinopesana pasi pe-radar zvinopa iko kusasununguka uye nzvimbo yaunoda. Around makumi mana muzana yevagari venyika vanogara muAthens nekukomberedza, izvo zvinoreva kuti kune mirwi yemakamuri muzvikamu zvakasiyana zverudzi, neanopfuura zviuru makumi mashanu zvemazana emakiromita uye mupfungwa chaiyo nhamba hombe yezvitsuwa zvinoshamisa zvekutarisa.
Iko mukana wekugara kuGreek kuri kugamuchira kune vamwe vanodzingwa. Greece inyika ine simba kwazvo inozivikanwa pasi rese kune ayo ese gore rakakura mamiriro, nhoroondo yakajeka, dhizaini yakanaka, uye hunoshamisa hunhu. Yakagamuchirwa muEU muna 1981, uye kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, nyika yakava nesimba rakasimba.
Greece inowanzo kuve nzvimbo yakachengetedzwa, uye panenge pasina kutadza chaiko. Ivo vane pamwe yakanyanya kushomeka yakajairwa mutengo wezvinhu zvekutanga muEuropean Union, kunyangwe hazvo nzvimbo dzemadhorobha, semuenzaniso, Atene inowanzo kuve inodhura kupfuura iyo yasara yerudzi. Nzira yehupenyu yakakwira, kunyanya muchiitiko chekuti iwe urikugara kuGreek pachibvumirano chekare-pat.
MaGiriki anozivikanwa nekukoka kusinganzwisisike uye muvakidzani. Chechi yeGreek Orthodox chikamu chakakosha cheGreek, uye 99% yevagari vanotevera chinamato ichi.
Kugara kuGreek seExpat
Kubvumidzwa kweGirisi muEU muna 1981 kwakazivisa kutanga kwemamiriro ekunze anogara kune dzimwe nyika. Izvi zvisati zvaitika, Girisi yaive yakawanda nyika yekurima uko vaimbova matepi vaigara vachisangana nekugara kwenguva inopfuura makore maviri patambo yerunhare, uye mota dzaiwanzoonekwa nekunze.
Zvakangodaro, kunyoresa muEU kwakachinja tarisiro yenyaradzo yemazuva ese zvakanyanya, uye hupenyu hwakareruka, zvisinei nekuti izvi zvinogona kunge zvakakanganisa hunhu hweGreek hwakapfuura.
Kusvika pari zvino kusvika nhasi, Girisi haina kunyanya kuitika pakati pevekare-patsva sechikamu chevavakidzani vayo vekuEurope. Izvi zvinowanzo kuve pasi penzira iyo pasingave nenhamba yakafanana yemasangano epasirese ari pano. Nekudaro mukana wekusimudzira basa rako pamwe hausi nyore sekushora kwakasiyana muEurope.
Zvese zvinhu zvinofungidzirwa, nyika inokoka vasina kujaira vashandi, uye kusimudzira kukuru kweGreek kwemaindasitiri ekufambisa kunoreva kuti kune zvakajairika kuvhurika muindasitiri iyi, semuenzaniso, kutanga bhizinesi, kutendeuka kuita nyanzvi yemuno, kana kutarisira mahotera. Kune avo vanofunga kutamira kune ino nyika inofadza, zvine hungwaru kuve nechokwadi nezveiye waunoshandira usati waita seakadai sehuwandu hwekushaya basa hwakanyatsokwirira; 9.5 muzana. Chinongedzo chinotungamira chinogona kukupa iwe rundown yezvakakosha zvinhu kuti ikubatsire iwe neiyi kutenderera.
Ivhareji mutengo wezvinhu zvekutanga muGreek
Greece munhu akasarudzika kubva kuEuropean Union uye anopa iyo Euro. Ivhareji yemutengo wezvinhu zvekutanga muGreek inowanzo 30% kwete kunyatso kuwanda mamwe marudzi eEurope, zvisinei, muripo wenguva dzose weGrisi wakadererawo. Chero zvazvingaitika, mari yemubhadharo yemubhadharo iri pasi peiyo ari munyika yakajairika yeEU, saka vanodzinga vanogara pano pamubhadharo wemuvakidzani mune chero mukana vane mukana wekurarama zviri nyore.
Zvinhu zvekudya zvine mwero zvinoshamisa kuGreek, kunyanya muRhodes, uko musina mitero yekupinza, izvo zvinoita kuti iyi ive nzvimbo yepamusoro kupfuura dzimwe nyika zhinji dzeEurope maererano nemari yekurarama. Zvinonyatso fungidzirwa kuti avhareji mutengo wezvinhu zvekutanga muGreek unowira zvakanyanya mukuuya kwenguva yakareba nekuda kwekuburitsa kunounzwa nedambudziko remari.
Nongedzo dzepasi rose dzekutama dzine poindi nepointi mari yekushandisa munzira dzakasiyana dzehupenyu uye dzimwe nzira dzekurarama kune mamwe anozivikanwa ekupokana. Sezvo vabatsiri vedu vakaumbwa nevekare-patsika vanogara uye vanoshanda mumarudzi pachawo, unogona kuvimbiswa kuti iyo data iri chaiyo, kumberi-kufunga, uye kuvimbika.
Zvekutanga zvinyorwa zveResidency neInvestment yeGreek
Chishoma kudyara kwe Kugara nekudyara kuGreek
Mari yekuwedzera ye yendarama vhiza ye Girisi
Kugara nekudyara kweGirisi
D vhiza kana Permanent Residence mvumo inoshanda inosvika makore mashanu
Kutora nguva yekugara nekudyara kweGreek
Mushure memakore 7
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa kuvagari vemuGreek
Investment Sarudzo dze Kugara nekudyara kweGreek
Nei uchienda kune Residency nekudyara kweGreek
Girisi, inova imba yeimwe yeakare mabudiriro muEurope, ine zviwanikwa zvetsika nemagariro. Nyika ine bhizimusi rekushanya riri kuwedzera. Nyika zvakare inhengo izere yeEU nenzvimbo yeSchengen, saka vagari vanogona kunakidzwa nekusununguka kwakazara munzvimbo yeSchengen uye kutengeserana kwakasununguka muEU. Iwe unogona kuwana yekumhanyisa-track yekugara muGrisi nekutenga zvivakwa, izvo zvaunogona kuroja kuvashanyi nevashanyi kuGreek. Iyo yekugara-ne-yekudyara chirongwa inokurumidza uye yakapusa, uye iwe unogona kusanganisira yako nhengo dzemhuri muchikumbiro. Iwe haufanire kupa pekugara pekugara kuGreek kana iwe wawana yako RP.
Mhuri yekupinda muGreek
Wawakaroorana naye anofanirwa kuverengerwa muchikumbiro chako, pamwe nevana vari pasi pemakore makumi maviri nerimwe. Zvakanakisa pane zvese, hapana mari yekuwedzera inodikanwa kuitira kuti ubatanidze nhengo dzemhuri.
Kugara nehurongwa hwekudyara muGreek inokurudzira
Unogona kunyorera kuGreek Embassy kana kunana kuDhipatimendi reImigration kuGreek Unofanira kunyoresa kutengwa kwezvivakwa muGreek kweinosvika EUR250,000, kana kana iko kutenga kwacho kusati kwaitwa, ipa Chibvumirano cheKubatanidzwa uye humbowo hwemari yakakwana.Nzira yacho inokurumidza: mukati memwedzi 1-1.5, iwe unowana mvumo yako. Iyo RP yakapihwa makore mashanu, uye inogona kuwedzerwa kune imwe mashanu.
Mari inodiwa yeGreek
Iwe uchazotengwa kuti utenge zvivakwa kweinenge EUR 250,000 muGrisi, uye chengeta mari yacho kwemakore gumi nemashanu. Iwe unogona kuve nebhenefiti kubva kuGirisi iri kuwedzera indasitiri yekushanya nekuhaya nzvimbo yako kune vashanyi.
Kutsigira kwevatengi kweResidency nekudyara kweGreek
Chikwata chedu che Residency neInvestment Agents kuGreece uye Residency ne Investment Lawyers weGirisi inopa vatengi uye mhuri dzavo kuGreek nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuGreek, kugara nekudyara kubva kuGreek nedzimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Masevhisi edu haana kungogumira kugari nekudyara kubva kuGreek kana Golden Visa kubva kuGreek kana ugari nekudyara kubva kuGreece kana yechipiri pasipoti, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara dzimba kubva kuGreece, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida kutanga kambani mu Girisi kana kumahombekombe, zviwanikwa zvevanhu kuGreek nezvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari nezvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuGreek uye sekondari pekugara.
Rutsigiro Rwakakosha kune Vagari veGreek:
Isu tinopa zvinodhura Kugara nemabasa ekudyara kweGirisi, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo yekuGreece, inokwanisika mari yekushambadzira inofambisa vekuGirisi, inokwanisika Residency nevarairidzi vezvekudyara kuGreek, inokwanisika Kugara nemagweta ekudyara kuGirisi uye inokwanisika yekuenda kune dzimwe nyika kufisheni yakasimba kuGreece.
Kugara nekudyara kubva kuGreece kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza kuGreek kune 37 Nyika.
Ugari nekudyara kubva kuGirisi kuenda ku37 Nyika.
Yechipiri pasipoti kubva kuGreece kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kubva kuGirisi kuenda ku106 Nyika.
Kugara nehurongwa hwekudyara kubva kuGreece.
Zvirongwa zvevisa zveGoridhe kuGreek kune 37 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuGreece kusvika ku37 Nyika.
Chechipiri mapasipoti mapasipoti kubva kuGreek kuenda ku37 Nyika.
Zvirongwa zveMabhizinesi ekupinda munyika kubva kuGreek kuenda ku106 Nyika.
Kugara nekudyara kweGreek kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvekudyara zvivakwa muGreek nemaonero ekuti mutengi anofanira kuwana kudzoka kwakanaka mukudyara kuGreek, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwakaitwa navo kweKugara kwavo nekudyara kweGreek. Isu tinosungirirwa nevashoma vashoma vezvivakwa zvevatengesi kuGreece vane yakanaka track rekodhi uye yavo pfuma iri munzvimbo dzakanaka kuGreek, kutora zvakanaka kudzoka.
Yakanakisa edzimba dzimba zvirongwa zveGreek pamwe nekudyara muzvivakwa muGreek.
Unoda kuziva - Greece Residency neInvestment
Kugara neInvestment Gweta kuGreek kunopa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Kugara nekudyara kuGreek. Yedu yakajairwa masevhisi ekugara zvakare neInvestment kuGreece inosanganisira:
Magweta edu achanzwisisa zvaunoda zvekutama kubva kuGreek kana kuenda kuGirisi, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Kugara nekudyara kweGirisi kune vatengi kuti vawane Residence Chibvumirano cheGreece uye kudzikisa njodzi yekuramba.
Kubva pane mushumo wekushingairira kweGreek, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira kuri nani.
Kuti isu tifambire mberi neako Residency nekudyara kunyorera kweGreek isu tingangoda makopi akaongororwa evatengi uye nhengo dzemhuri pasipoti.
Dudziro uye apostile ezvinyorwa Kugara nekudyara kunyorera kuGreek. Magweta edu akasarudzika eResidency nekudyara kweGreek uye vhiza yegoridhe inobatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zveResidency nekudyara kunyorera kuGreek kwagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvakakodzera zveGreek.
Kamwe kana chikumbiro chako cheKugara nekudyara kweGreek chabvumidzwa, tinogovana nhau dzakanaka newe uye totanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Isu hatitsigire kana kupa Residency nemabasa ekudyara kuGreek kune vanhu vataurwa pazasi kana mabhizinesi kuGreek:
Residency nemabasa ekudyara kweGirisi hazvipi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovanisa zvombo uye zvombo kubva kana kuGirisi.
Residency nezvirongwa zvekudyara zveGreek hazvipi kupihwa kweTechnical surveillance kuGreek kana maindasitiri espionage ezvirongwa zvekudyara mukati kana kubva kana kuGreek.
Residency nekutsvaga kwekudyara kweGirisi hadzipi kupihwa chero zvisiri pamutemo kana tsotsi zviitiko kuGreek.
Residency nerutsigiro rwekudyara weGirisi haisi yevanhu vanobata maGenetic zvinhu muGreek.
Residency nemabasa ekudyara kweGirisi haisi yemabhizimusi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine ngozi zvebhagiriya kana zvombo zvenyukireya kuGreece.
Residency nechirongwa chekudyara rutsigiro rweGreek haruwanikwe kune vanhu veGreek vanobata mukutengesa, kuchengetedza kuGreek, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Residency nekudyara weGirisi haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Residency zvirongwa zvebasa weGirisi haisi yezvitendero uye masangano avo kuGreece.
Residency nebasa rekudyara mu Girisi haina kupihwa kune vanhu vanogadzira Zvinonyadzisira muGreece.
Kugara Kwedu magweta kuGreece haitsigire bhizinesi rekutengesera mumidziyo yezvinodhaka kuGreece.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veGreek neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekurambwa chero kupi zvako kubva kuzviremera zveGreek kubvumidzwa kunyorera Residency nekudyara kuGreece.
Kugara nekudyara kuGreek nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa yakanakisa Residency nerutsigiro rutsigiro kuGreek kwekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa kuGreek.
Inotsigirwa neInternational Residence neruzivo rwekudyara uye zvinodiwa nemutemo zveGreek, isu tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Yedu Residency nemabasa ekudyara kweGirisi inopa mitengo yakachipa, iine mukana wekupunduka weGreek.
Isu takatora makore eruzivo rwekugara kwevaviri kuGreek kutsigira vatengi uye mhuri dzavo kuGreece.
Ruzivo rwekugara nekudyara kwekukumbira kuGirisi uye nevamiriri vepamutemo veGirisi vanopa rutsigiro kune vatengi.
Tine akanakisa magweta nevamiriri veGreek kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Pamberi pekugara kwako kuGreece uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro yaizovapo yebhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuGreek
Isu tine ruzivo rwepasirese muResidency nekudyara kusanganisira Greece, kubatsira vatengi kubva kumativi ese epasi nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Kugara kwako nekudyara kuGreece kunokundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu neshanu dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weKugara neInvestment kuGreek
Kuti uverenge mutengo weKugara nekudyara kweGreek ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi veGreece, isu tinokwanisa kupa zvirinani masevhisi nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchaita, kunosanganisira, mutengo weKugara nehurongwa hwekudyara kweGreek uye zvimwe zvikwereti.
mhando vhiza weGirisi
Maitiro Ekubvumirwa kweGreek kuGreek
Kwekugara kwenguva pfupi kuGreece
Permanent Residence kuGreece
Embassies uye ma Consulates eGreece
Kugara neInvestment kuGreek uye Mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mamwe mashoma masevhisi atinopa kuGreek kwezvinodiwa nekukurumidza kana mune ramangwana.
Kana iwe uri kuronga kutamira nemhuri yako kuGreek nekudyara mari, isu semumwe wako kuGreece, tiripo kuti tipe zvakawanda zveimwe sevhisi uye uye kana paungangoda kuGreek nemitengo inodhura.
Kunze kweResidency nekutsvaga kwekudyara kuGreek, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare kuGirisi, izvo iwe zvausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nevamwe vapi vamazano eGreece ichitigadzira shopu imwechete yekumirira yeGreek nenyika dze106.
"Takaisa makore ekuyedza uye pasi rose muZuva 106 kubatsira mhuri, vanhu, uye mabhizimusi eGreece mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira yedu mutengi nzira yekupfuura Residency nekudyara kweGreek nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga-muGrisi nepasi rese.
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani kuGreece kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani kuGreek yakachipa nesu.)
Akaundi yeBhangi kuGreece
Chero ani investor anotamira kuGreek angazoda akaundi yebhangi wega kuGreek uye account yebhangi yekambani kuGreece, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Peji yekubhadhara kuGreek
Zvikuru iwe unoda kubvunzana kuGreek, kwe mhinduro dzemadhijitari kuGreek senge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi kuGreek kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meResidency nekudyara ku Greece kana uchironga tanga bhizinesi nekutenga ravepo bhizinesi kuGreek kutanga pakarepo muGrisi.
HR Services kuGreece
Our kambani yevashandi kuGreek inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post nzvimbo muGrisi vakasununguka.
Nhamba dzeNhare dzeGreek
Bhizinesi foni masystem eGreek pamwe ne nhamba dzeGrisi Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muGrisi
Accounting, kushingairira kwakakodzera muGirisi uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero kuGreek
Setup bhizinesi kuGreek
Mushure meResidency nekudyara kuGreece, setup bhizinesi mu Girisi.
Isu tinopa pazasi kutaurwa IT mhinduro muGrisi
Webhu Kugadzira muGrisi
Ecommerce Kuvandudza kuGreece
Webhu kuvandudza muGreek
Kuvandudza kweBlockchain kuGreek
App Kubudirira muGreece
Software Kubudirira muGreece
Magweta eResidency neInvestment kuGreek
Isu tinopa Kugara zviri pamutemo neInvestment mhinduro kuGreek uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuGirisi, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo yeGirisi ine vamiririri vakanakisa vekupinda muGrisi, isu tine mukurumbira wekuburitsa yakanakisa vatengi sevhisi yeGreek ne kujekesa sarudzo dzekudyara mhinduro dzeGreek vanhu pamwe nemhuri dzavo. Yedu Residency neboka rekudyara kuGirisi inopa mhinduro dzakagadzirwa dzekubudirira kweKlayenti.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mukadzi, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara kuGreek, pane yako mvumo yekugara kuGreek inobvumidzwa.
Simba regweta reGreek rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako neResidency nevamiriri vezvekudyara kuGreek. Kana iwe uri kuGirisi kana kuronga kushanyira Greece, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadhare yakawedzera yekuwana Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kweGreece kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe mundima yeGreek. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakatendeka kana kubvumidzwa nemumiriri weGreek.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Kugara neInvestment kuGreece
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara kuGreek?
Kugara nekudyara kuGirisi, kunogona kutsanangurwa sekuwana kugara kweGreek kuburikidza nekudyara muhupfumi hweGreek kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kuti ugare nekudyara kuGirisi, ugaro nehurongwa hwekudyara kweGirisi. inotsigirwa nekugara nenzvimbo dzekudyara kuGirisi, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara kuGreece, kugara kwakanyanya nemagweta ekudyara kuGreece uye kugara kwakanakisa nevanoona nezvekudyara kuGreece, vachishanda zvakanyanya kugarwa nevamiriri vezvekudyara kuGreek, uye akanakisa mafemu ekubvunza nezvekupinda munyika. kuGreece.
Kugara nemabasa ekudyara kweGirisi | Kugara nevamiriri vezvekudyara kuGreek | Kugara nemagweta eInvestment kuGreek | Kugara nemagweta ekudyara kuGreek | Kugara nevanoona nezvekudyara kuGreek
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara kuGreek?
Ugari nekudyara kuGreece, kunogona kutsanangurwa sekuwana ugari hweGreek kuburikidza nekudyara muhupfumi hweGreek nenzira dzakasiyana senge bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe kuGreek. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuGirisi, ugari nehurongwa hwekudyara kuGirisi inotsigirwa nehugari nehumambo hwekudyara kuGirisi, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisisa nemagweta ekudyara kuGreece, ugari hwakanakisa nemagweta ezvekudyara kuGreece kuva chizvarwa chakanakisa nevamiririri vezvekudyara kuGreek, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda munyika.
Inodhura Mutyairi wekufambisa mabasa eGreek | Vanodhura vanoenda kune dzimwe nyika vanokumbira kuGreek | Vanodhura varidzi vemari vanoenda kune dzimwe nyika kuGreece | Vanodhura varidzi vekupinda munyika maGweta | Vanodhura varidzi vemari vanoona nezvekupinda kuGreek | Affordable immigration law firms for Greece
Ndeipi tsananguro yepasipoti yechipiri kuGreek?
Yechipiri pasipoti kuGreek, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari wepamutemo weGreek kuburikidza nekudyara muhupfumi hweGreek kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, real estate, bhizinesi, hurumende zvisungo, nezvimwe. wechipiri pasipoti masevhisi eGreek, kuburikidza nemagweta edu epiri epasipoti kuGreek, magweta echipiri epasipoti kuGreek uye akanakisa echipiri mapasipoti ekuGreek, anoshanda kumahofisi echipiri epasipoti kuGreece, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda muGreek.
Chechipiri pasipoti masevhisi eGreek | Chechipiri pasipoti vamiririri kuGreek | Yechipiri mapasipoti magweta kuGreek | Yechipiri mapasipoti magweta kuGreece | Chechipiri pasipoti vanopa mazano kuGreece
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa kuGreece?
Ndarama vhiza kuGirisi, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana mvumo yekugara kweGreek kuburikidza nekudyara muhupfumi hweGreek kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvisungo zvehurumende, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. Nyorera vhiza yegoridhe kuGreek, chirongwa chendarama vhiza kuGreece inotsigirwa goridhe vhiza masevhisi eGreece, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe visa magweta kuGreece, akanakisa egoridhe vhiza magweta kuGreece uye akanakisa egoridhe vhiza varairidzi veGreece, vanoshanda kune akanakisa egoridhe vhiza vamiririri kuGreece, uye akanakisa ekupinda kwekufambisa mafemu kuGreece.
Goridhe vhiza masevhisi eGreek | Ndarama vhiza vamiririri kuGreek | Magoridhe vhiza magweta kuGreek | Magoridhe vhiza magweta kuGreece | Goridhe vhiza varairidzi veGreek
Ndechipi chiri chidiki chekudyara kweResidency nekudyara kuGreek?
Pashoma kudyara kweResidency nekudyara kuGreek iEUR 250,000.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuGreece yeResidency nekudyara here?
Ehe, gweta redu kuGreek nevamiriri kuGreece vanopa rutsigiro rweKugara nekudyara kuGreece.
Kugara nekudyara kuGreek kunodhura here?
Mutengo weKugara neInvestment kuGreek uye Residency nemari yekudyara zvinodiwa kuGreek ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete kubvunza fizi yeResidency neInvestment kuGreece, isu tinopawo yakawanda mimwe mitsigiro yeResidency neInvestment mhinduro.
Ndeapi vagari venyika vanogona kunyorera Residency nekudyara kuGreek kana investor vhiza kuGreece?
Kugara nemabasa ekudyara mari anogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeyeKugara nekudyara kuGirisi kubva kuAsia, Kugara nekudyara kuGirisi kubva kuAfrica, Kugara nekudyara kuGirisi kubva kuEurope, Kugara nekudyara kuGirisi kubva kuSouth America, Kugara nekudyara kuGirisi kubva kuMalaysia, Kugara nekudyara kuGirisi kubva kuBangladesh, Kugara nekudyara kuGirisi kubva kuIndonesia, Kugara nekudyara kuGirisi kubva kuSri Lanka, Kugara nekudyara kuGirisi kubva kuNepal, Kugara nekudyara kuGirisi kubva kuIndia neResidency. nekudyara kuGreek kubva kuAFA.
Professional Residency neInvestment Guidance weGirisi
Kumbira kubvunza Mahara kune yako Residency neInvestment kuGreek
Mazwi akakosha muRudzi rwekugara neInvestment yeGreek
Nharaunda yeEastern Macedonia-Thrace - www.pamth.gov.gr
Ministry of Economy and Development - www.yavod.gov.gr
Nziyo dzeGreek "rebetika"
Mimhanzi yechiGiriki inoimba uye kutamba
Kutungamira Chiremera cheEuropean Territorial Cooperation Zvirongwa - www.chirina.gr
Nharaunda yeCentral Macedonia - www.pkm.gov.gr/
Dunhu Rakasimudzwa reMacedonia-Thrace - www.damt.gov.gr
Hellenic Hurumende - www.inovergo.gr
Greek National Tourism Sangano
Greek Ministry yekune dzimwe nyika
Mamiriro ekunze: Hellenic National Meteorological Service
Link to Dhipatimendi Rekupinda muGreek , ane basa rekuumba marongero ekuchimbidza kuenda kune dzimwe nyika kuGreek